Naqshadeynta & Soosaarka
Khadadka Waxsoosaarka Guddiga Gypsum
Khadka Waxsoosaarka Budada Gypsum
Khadka Wax Soo Saarka Gypsum
Aqoon-isweydaarsiga Qaab-dhismeedka Birta
Dayactir Qaybta & Mashiinka Kali ah
Waxyaabaha ceyriinka ah
Nidaamka shiidi budada Gypsum
Cunto-siiyaha birqaya ayaa si siman oo isdaba-joog ah u quudinaya dhagaxa weyn ee gypsum si loogu shiido. Budada 'gypsum budada' ka dib markii la shiidiyo waxaa lagu qaadayaa hawo qaadashada afuufa, waxaana lagu kala saaraa kala-soocaha. Budada ku habboon ayaa soo galeysa iyada oo qulqulka hawadu soo ururinayo duufaan ilaa t ...
Waa maxay guddiga balastarka gypsum?
Looxyada gypsum plaster ee lagu soo saaray baaxadda adduunka inta badan waxaa ka mid ah: guddiga gypsum-ka warqad-wajaha, guddiga gypsum-ka aan warqadda lahayn, guddiga gypsum-ka lagu qurxiyo, guddiga gypsum-ka fiber-ka ah, guddiga codka-nuugaya ee gypsum, iwm. Warqad-fa ...
Xaaladda hadda jirta ee dhismaha Gypsum
1940-yadii, biyo-biyo-yar-yar-yar oo laga sameeyay gypsum-ka dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay si caalami ah si loogu soo saaro baloogyada 'gypsum blocks' iyadoo loo marayo habka loo shubay caaryada fidsan. Bartamihii-1950-meeyadii, wax-soo-saarkii ayaa loo beddelay shubista tooska ah iyo tikniyoolajiyadda jajabka, waxsoosaarkuna waa sii kordhay ...
Warqad loogu talagalay Guddiga Gypsum ee Iibinta
Warqad loogu talagalay Gudiga Gypsum. Waxay ka kooban tahay xaashi weyn oo ah gypsum plasterboard oo caadi ahaan gaaraya ilaa nus-dhumuc dhumuc ah (qiyaastii 1 cm), oo inta badan loo kala jaro afar ilaa sideed farood oo cag ah (qiyaastii 1.2 mitir iyo 2.4 kulmiyaha). Warqad qaro weyn oo waara, oo loo yaqaan 'paperwall paper', ayaa safafka labada dhinacba. Gypsum-guddiga f ...
Qeybinta Khadka Waxsoosaarka Guddiga Gypsum
Khadka Waxsoosaarka Guddiga 'Gypsum Board Production Line' wuxuu inta badan ka kooban yahay lix qaybood oo ah nidaamka isku-darka, soo-saaraha, nidaamka cirbadeynta wakiilka xumbada, nidaamka jarista, gudbinta iyo goynta nidaamka, dib-u-warshadaynta & nidaamka pelletizer. Alaabtayadu waxay leedahay faa iidooyinka qaabeynta heer sare, qaab macquul ah, wax soo saar sare, hooseeya ...
Shiinaha Oo Markii Ugu Horaysay La Isticmaalay "ZTF Forming Habka" Khadka Wax Soo Saarka Mashiinka.
Sannadkii 2017, waxaan DCI kaqeyb qaadanay Bandhigga Iran, Carwada Dubai iyo India Exhibition.Our waxyaabaha ugu muhiimsan, line-soo-saarka guddiga gypsum, line-soo-saarka budada gypsum, line-soo-saarka block gypsum, sidoo kale alaabta ceeriin iyo qaybo dayactir iwm.
Soo Saaraha Khadka Waxsoosaarka budada Gypsum
Budada 'Gypsum' waxaa loo isticmaali jiray nolosheena iyo warshado badan muddo dheer. Nolosheena caadiga ah, bini'aadamku waxay u isticmaalaan nuurad, tofu iyo farsamo, iwm. Meelaha warshadaha, Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha dhismaha sida qashinka iyo warshadaha baab'inta. Khadadka wax soo saarka budada Gypsum (gy ...
Soo saaraha Mashiinka Shiinaha
Iyadoo lagu saleynayo siinta ciyaar buuxda qaabdhismeedka isukeenista, hawlgalka fudud iyo dayactirka fudud ee mashiinka maqalka, qaab dhismeedka qalabka wax lagu kicinayo ayaa la wanaajiyaa, booska qolka isku dhafka ayaa la dhimay, waqtiga deganaanshaha qaska ee qas a. gaabin, iyo slurry gypsum waa casaan ...
Sanadkii 2017, waxaan DCI kaqeyb qaadanay Iran anaga DCI ayaan kaqeyb qaadanay Iran anaga DCI ayaan kaqeyb qaadanay Iran
Qof kastaa waa inuu yaqaana maaskaro caafimaad oo la iska tuuri karo. Waxaad ku arkeysaa dad badan oo dariiqyada xidhan oo wajiyada soo duubanaya, gaar ahaan xilliyada cudurrada faafa, maaddaama oo loo baahan yahay waji-daboolan goobaha dadweynaha. Maaskarada la tuuro ee la tuuro waxay ka hortagi kartaa bakteeriyada iyo fayrasyada inay galaan jirka aadanaha. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan shaaciyo ...
Sannadkii 2017, waxaan DCI ka qayb qaadannay Iran
Gansu gypsum guddiga gaarsiinta khadka soo saarista
Shirkaddayadu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo dhammeystiran oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista, bixinta, rakibidda iyo ku shaqeynta ...
Telefoonka: +86 311 8929 6853
Cinwaanka: Xujiazhuang Industrial Park, Jizhou, Hebei, Shiinaha